Haka yeelin saaxiibkaa habeynka koowaad ee kulankiina sidaan…… | Gaaloos.com
Home » galmada » Haka yeelin saaxiibkaa habeynka koowaad ee kulankiina sidaan……
Haka yeelin saaxiibkaa habeynka koowaad ee kulankiina sidaan……
Kolay Akhriste laba qof oo kasta oo wada abaabula nolol qiimo leh ama mid aan wanaagsanayn habeen ama maalin ayaa ay kulmeen markoodii ugu horaysay waayo labada qof may dhalan iyagoo isgaranaya waxan maanta kalna kusoo qaadanaynaa waxyaabaha ay haboontahay inaad ka dheeraato kulanka koowaad ee qofkaas:
Aad ha isku qurxinin:- uma soctid qof aad wax badan la sheekeysaneysay, waxba ha xishan dharkaga ugu qatarsan oo adoo dhan casaan ha iska dhigin.
Xidhiidhkagi Hore:- Su’aalo badan ayuu ka weeydiin hadaxidhiidh hore lahayd iyo sababta usoo dhamaysay. Waxba haku dheeran oo usoo gaabi, hadaa tahey gabar xidhiidh badana oo 10 wiil soo martayna 3 oo kaliya u sheeg,
Calaacal Maya:- Maka yaabta dad marka kula kulantid meelaha caamka ah oo kaga sheekeya noloshooda khaaska ah ayagoo ka cabanaya islamarkas. Iska ilaali inaad u calaacashid oo waa qariib qofka aad la hadlayso wali si fican umaad baran wuuna kula yaabi.
Kaftan:- Waa fiicantahey inaa kaftantid laakinse ha ka badbadin oo kaftan miidhan haka dhigin sheekada. Miisaan hadalkaaga oo yuusan wiilka ku maleyn qof arag gaaban, u niyad furnaan oo mid caajis badan haka dhigin kulankiina ugu horeeya.
Rasiidka Cuntada: runtii sida wacan qofka soo agaasima oo ra’yiga leh ayaa badana bixiya, sida caadada ahna wiilka ayaa bixiya. Waxba haku dagdagin balse iska dhig qof raba inuu bixiyo haduu ka ogalaado ogow wiilkas waa mid gacan adag oo ka fakar inaa xidhiidhka ka midha dhalisid.
Waqti badan ha qaadan:- Dabada ha is xanuujin hal habeen qof ma ku ogaan kartid, kulanka kowaad waa is barasho iyo is arag oo kaliya hadalkaga intaas waxba yuusan ka dheeran. Hadeey kula tagto sheekada yeeysan kala badnaan 2 saacadood. Waxkastoo aad sameysaa ha u raacin meel kale oo maqayaada marka kasoo tagtid hore usoo mac salameey.
Mobile:- Mobile-kaga ku rid boorsada aad wadatid intaa amusisid, HA ISTICMAALIN. Xushmeey qofka ku hor fadhiya.
Amusnaan:- Hadaa tahey qof aamus badan, habeenkas hadal. Haduu isagu aamusana ka hadalsii, waa fududahey sida qof looga hadalsiiyo. Su’aal weydi ama ka qosli, marka furfurtid asaga iska hadli doona.
Shaneemo:- Haduu wiilka ka codsado in kulankiina kowaad ku qaadataan shaneemo iyo filin daawasho haka yeelin. Maxa yeeley habaankas dhan waa amusnaaneysan wuxuna doonaya in uu baalka ku gashto.
Raqiis ha iska dhigin:- Haduu ku dhaho dooro meel aan ka cuntayno haka yeelin, haduu maqaayad raqiis ah doortana haka yeelin.
Title: Haka yeelin saaxiibkaa habeynka koowaad ee kulankiina sidaan……